Ebee ka ịchọta ọrụ ịmepụta ngwá ọrụ Amazon maka n'efu?
Site na afọ na-adịbeghị anya, anọwo m na-agba mbọ iji mee nchọpụta ndị ọrụ bara uru iji meecha chọpụta ya. Ajụjụ a bụ - ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji nweta nhazi njirimara nke njirimara ngwaahịa na Amazon ma na-eji ngwá ọrụ na-enweghị isi n'efu, na okwu ndị ọzọ, dị na ịnweta ohere na Ịntanetị. Na azịza dị mkpirikpi bụ ee, ọ bụ. N'ezie, ị nwere ike ịmepụtawanye ọrụ niile nke azụmahịa gị na-ejupụta na Amazon na-eji ngwá ọrụ na-egosi na ị nwere ike ịnweta, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala na-enweghi ngwugwu nke dị na enweghị ọnụọgụ ego kwa ọnwa, . Nke a bụ ihe m nwere maka anya gị, ma ka m kwuo ya ọzọ - M na-edepụta ọ bụla Amazon keyword ngwá ọrụ na free ojiji ma ka na-arụ nsonaazụ naanị. Yabụ, ka anyị lee anya nke ọ bụla n'ime ha.
SEO Stack - bụ ihe ntanetị dị n'ịntanetị nke ka na-emepe. Ka o sina dị, ọ nwere ike ịnye gị ezigbo ọrụ na ịmepụta mkpụrụ okwu, nyochaa asọmpi asọmpi na Amazon, na ịchọta aro bara uru na mkpụrụokwu ndị kachasị mma na ogologo okwu nke ogologo oge iji bulie ndepụta ngwaahịa gị dịka pro.
AMZ Sistrix - akụkụ kachasị ike nke usoro ikpo okwu a bụ ọsọ ya na ejiji. M pụtara na ị nwere ike iji AMZ Sistrix nye gị isi isiokwu analysis ọ bụghị naanị na Amazon ma Google na eBay nakwa. Ihe niile ị chọrọ bụ iji jupụta isiokwu - ma ga-emere gị ndị fọdụrụnụ, ngwa ngwa, ngwa ngwa, na maka n'efu.
Onye Ọkà Mmụta Sayensị - nke a na-egosi na ịntanetị bụ ngwụcha zuru ezu nke ihe a kpọtụrụ aha na mbụ. Ekwuru m na n'adịghị ka ọrụ ndị ngwa ngwa na ngwa ngwa, Onye Ọkà Mmụta Sayensị dị ntakịrị ka otu ọrụ nyocha ọ bụla weghara oge niile. Ka o sina dị, usoro a na-arụ ọrụ ma na-edozi usoro ahụ n'enweghị ego ọ bụla.
Sonar - bụ ngwá ọrụ Amazon ọzọ na-enweghị ihe ọ bụla. N'ezie, ọ na-abịa dị ka ntanetị Google iji bụrụ nke kachasị. Na agbanyeghị, Sonar dabere na mgbagwoju anya na indexing algorithms iji jidere okwu ọbụla n'ọtụtụ ebe na ndị ahịa na-ere ahịa na ebe ahịa ahụ. Maka ihe ụfọdụ ana m anụ na enweghị ya maka njirimara ndị kachasị elu, ọ na-azọrọ oge na oge karịsịa site na akụkụ ndị ọzọ na-ere ahịa ecommerce nwere ahụmahụ. Ma enwere m oke nkwekọrịta, ọ bụ naanị na Sonar na-ejere m ozi nke ọma, ma ọ dịkarịa ala maka ihe ọ bụla e nwetara na ya.
Google Keyword Planner - nke siri ike, ọ dịghị eme egwuregwu ebe a, dị ka isi okwu ntanetị a na-enye site na nnukwu nnweta nke ụwa bụ ihe ngwọta kachasị mma maka ndị na-ere ahịa na ndị webmasters ochie, maka n'efu dị ka mgbe niile. Dị ka ọ dị kemgbe ọtụtụ afọ, Google AdWords nọgidere na-enwe ike dị ukwuu iji nyere gị aka ịchọpụta isiokwu ndị kachasị mkpa na-akwado yana aro bara uru (n'agbanyeghị ihe kpatara ya - ma ọ bụ ngwaahịa ndị e depụtara na Amazon, ma ọ bụ ụlọ ahịa weebụ ọ bụla nke onwe ya na nke onwe ya na- ezu) Source .